ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - အဆက်အသွယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုစေလွှတ်မည် [email protected]
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များအသငျသညျရှိစေခြင်းငှါလိုအပ်သမျှကိုသင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းနှင့်မဆိုစည်းဝေးရန်ကျူးလွန်နေကြတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျနားထောငျတျောထံမှဖို့ကိုချစ်မယ်! အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီရန်စေခြင်းငှါဒါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပေးပါ။
သင့်နာမည်: * *
ကျနော်တို့အကြောင်းသင့်ရှိစေခြင်းငှါမည်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး , ခရီးသွားလာ, ယဉ်ကျေးမှု, သို့မဟုတ်လုပ်ငန်း။
ဂျာနယ်လစ်များမဆိုလက်ရှိအဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်. updates ကိုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုဆိုကြသည်။
သောကြာနေ့မှတဆင့်အနည်းဆုံး 24 နာရီ turnaround အချိန်, တနင်္လာနေ့ခွင့်ပြုပေးပါ။